AgriTourism - Fitsangatsanganana ankohonana | Seymour, IN | Ivon-toeran'ny mpitsidika an'i Jackson County
Ity fitsangatsanganana mitondra fiara mitokana ity dia fanomezam-boninahitra ny “toeram-piompiana velona” sy ireo olona izay nahatonga azy ireo ho iray amin'ireo fananana lehibe indrindra eto amin'ny distrikanay. Hiaina ny zava-drehetra ianao manomboka amin'ny asa fambolena maoderina indrindra ka hatramin'ny toeram-pambolena sy fiompiana kely taloha. Hisy biby maro hijerena eny amin'ny toeram-piompiana sy amin'ny toeram-ponenany voajanahary. Ny sasany amin'ireo vistas sy mpamily tsara tarehy indrindra dia hita ao amin'ity faritra Jackson County ity.
Ny fitsidihana dia afaka vita ao anatin'ny adiny roa na mety maharitra hatramin'ny antsasaky ny andro, arakaraka ny zavatra mahaliana anao sy ny hafirianao no hitsidihanao.
Tsindrio eto raha hampidina fampahalalana momba ny fitsangatsanganana fiara
Tsenan'i Stuckwish Farm
Ny toeram-pambolena sy fiompiana fianakaviana dia manana tantara lava tany Jackson County ary eo amin'ny 7 km miala an'i Brownstown amin'ny State Road 135. Tsidiho ny tsenanay hankafy ny vokatra vaovao eto an-toerana mandritra ny fijinjana. Tena reharehantsika ny manome ny vokatra farany sy tsara indrindra ho an'ny latabatry ny fianakavianao. Manomboka amin'ny vokatra vaovao sy voavoly eo an-toerana ka hatramin'ny tantely sy kesika ao an-toerana dia voasaronay ianao. Izahay koa mitondra kojakoja eto an-toerana sy haingo an-trano avy amin'ny fiarahamonina misy anay. Mijanona ary mitsidika anay ary mankafy ny dikan'ny Jackson County, Indiana.
Tsindrio eto raha hitsidika tranokala!
Tsenan'ny toeram-pambolena sy fiompiana hackman
6077 S. State Road 135, Vallonia, 812-358-3377, Lohataona hatramin'ny fahavaratra.
Ny tandindon'ny tsenan'ny toeram-piompiana miasa, manolotra izay rehetra antenaina amin'ny tsenan'ny fiompiana amoron-dalana. Ny katsaka, voatavo, voatabia, tsaramaso maintso, cantaloupe ary na dia tantely vokarina eto an-toerana aza dia misy eny an-tsena, izay tantanan'ny fianakaviana Hackman sy ny namany. Eo anelanelan'ny Vallonia sy Salem, ny tsenan'ny fiompiana dia manodidina ny 10 kilaometatra miala an'i Brownstown fa mendrika tokoa ny fiara.
Tsenan'i Tiemeyer's Farm
Fantatra amin'ny vanim-potoana maharitra sy isan-taona mandritra ny vanim-potoana, gourds, voatavo ary kalesy isan-karazany ary ny tsena anatiny izay misy voankazo, legioma, vatomamy, jellies ary entana marobe. Trano fisakafoanana feno manompo ny vahiny ary manolotra sakafo maraina, atoandro, sakafo hariva ary na dia ny pizza! Manolotra zavatra ho an'ny rehetra ny tsena, manomboka amin'ny paiso sy voatavo amin'ny fahavaratra ka hatramin'ny zucchini, voatabia, melon sy voatavo ary gourds. Misy aza ny zoo biby fiompy kely ary ny lalao golf kely. Hazo krismasy voapaika vaovao sy fehezam-boninkazo vaovao atolotra amin'ny fialantsasatra.
Tsenan'ny tantsaha any Seymour
Walnut Street Parking Lot, Seymour, Mey hatramin'ny Oktobra
Ny vokatra sy ny entana isan-karazany dia raisina an-tsena amin'ny tsenan'ny tantsaha amin'ny afovoan'i Seymour. Ny "MarketLite" dia atao manomboka amin'ny 2 hariva ka hatramin'ny 6 hariva Alatsinainy ary 8 maraina ka hatramin'ny mitataovovonana Alakamisy hatramin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano ary manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny mitataovovonana amin'ny asabotsy volana oktobra. Ny tsena feno dia hotanterahina manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny atoandro, Mey hatramin'ny septambra. Ny sabotsy faha-3 isam-bolana, hatramin'ny volana jona ka hatramin'ny septambra, dia tsena manokana asabotsy miaraka amina fampisehoana fandrahoan-tsakafo, hetsika ho an'ny ankizy, mozika sy maro hafa.
Tsenan'i St. Farmer Brownstown Ewing Main St.
Heritage Park, akaikin'ny lapan'ny distrika, Jona ka hatramin'ny Oktobra
Ny vokatra sy ny entana dia raisina an-tanan-droa ao amin'ny kianja fitsarana ao Brownstown. Ny tsena dia atao isaky ny zoma manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 1 ora tolak'andro hatramin'ny Jona ka hatramin'ny Oktobra.
Tsenan'ny tantsaha Crothersville
Tongasoa ny vokatra sy ny entana. Ny tsena dia atao isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny mitataovovonana. Antsoy ny 812-390-8217.
5875 E. Co. Rd 875N., Seymour, fiorenan'ny vokatra eny amoron-dalana.
Tsenan'ny Fambolena ao VanAntwerp
11181 N. US 31, Seymour, 812-521-9125, fiorenan'ny vokatra eny amoron-dalana.
Ity tsena ity dia misy fiantsonana amoron-dalana amin'ny West Tipton Street ihany koa.
Toeram-piompiana ronono any Lot Hill
10025 N. Co. Rd. 375E., Seymour, 812-525-8567, wwq.mandohar.com
Fambolena ronono any an-trano, manao fromazy isan-karazany, anisan'izany ny fromazy azo zahana miaraka amin'ny ronono fotsy sy sôkôla. Ny gelato koa dia misy amin'ny tsiro isan-karazany… vita amin'ny ronono avy amin'ny sakafon'ny ronono. Amidy eny amin'ny Farmer's Markets eo an-toerana sy avy amin'ny magazay fiompiana amin'ny fananany ny entana.
Farmstead an'ny mpividy sy Bowers
Ity toeram-piompiana iray fianakaviana ity tamin'ny 1886 dia nanova ny fiasan'ny valan-javaboary mahazatra ho lasa mpamokatra famokarana voajanahary sy feno otrikaina. Ny entana any amin'ny toeram-pambolena dia misy ny sakafom-boaloboka, omby vita ahitra, atody ahitra, lafarinina varimbazaha ary popcorn.
4160 Atsinanana County Road 925N, Seymour
Aquapon dia trano fandraisam-bahiny eo an-toerana. Ity toeram-pambolena ity dia manolotra maitso sy tilapia ho an'ireo magazay, orinasa ary mpanjifa eo an-toerana.
Fambolena Rolling Hills Lavender
4810 Atsinanana County Road 925N, Seymour
Ity toeram-piompiana ity dia mirehareha amin'ny fitomboan'ny lavender tsara tarehy sy munstead ao amin'ny toeram-pambolena ao Cortland, IN. Ny nofinofin'ny agritourism lavender dia nanomboka tamin'ny taona 2018 ary ankehitriny ny tanin'izy ireo dia fonenan'ny zavamaniry lavender 2,000 mahery. Amin'ny taona 2020, hovidiana ny bundles.
Toeram-pisotro misy divay / fivarotana labiera
Ny Chateau de Pique Winery sy ny labiera
Chateau de Pique dia manasongadina efitrano fanandramana sy faritra fandraisana any am-baravarankely mahafinaritra. Ny efitrano fanandramana dia manolotra divay maimaim-poana manandrana fito andro isan-kerinandro. Voaloboka voaloboka fotsy sy mena misy hektara telo hektara no mipaka ao amin'ilay trano ary ny lisitry ny divay dia misy karazany 25 sahady, manomboka amin'ny Riesling ka hatramin'ny Semi-Sweets ka hatramin'ny Port Sweet. Ary aza adino ny manandrana ny labiera Chateau de Pique amin'ny manaraka rehefa mitsidika ianao! Chateau de Pique koa dia manana fivarotana zanabolana ao amin'io faritra io.
Chateau de Pique dia hita any amin'ny 6361 North County Road 760 East, Seymour, 812-522-9296.
Fivarotana divay any Salt Creek
Nanomboka tamin'ny taona 2010 i Salt Creek Winery ho fialamboly ho an'ny fianakavian'i Lee. Ny famiazam-boaloboka dia ao amin'ny havoana mihodinkodina any atsimon'i Indiana ary manamorona ny ala nasionaly Hoosier. Miaraka amin'ny divay voaloboka, ny vokatry ny Lee dia divay avy amin'ny blueberry, frezy, cherry, poars, plum ary na dia blackberry wild. Ny mpamokatra divay Salt Creek dia mamokatra merlot, cabernet sauvignon, chambourcin, Riesling, mena milentika, blackberry, fotsy fotsy, blackberry wild, plum, blueberry, manga, paiso, moscato, mena mamy, fotsy mamy, Catawba ary voaroy mena.
Salt Creek Winery dia miorina ao amin'ny 7603 West County Road 925 Avaratra ao Freetown. 812-497-0254.
Orinasa Seymour Brewing Company
Ny Seymour Brewing Company no labiera miasa voalohany an'i Seymour. Mijanona ary manandrama pint iray na fenoy ny mpamboly anao. Mozika mivantana natao tsindraindray tao amin'ny brewpub ary, rehefa tsara ny toetr'andro, mankafiza feo ao amin'ny Harmony Park mifanila aminy. Misy fandaharam-potoana feno mpanakanto hiseho mandritra ny fahavaratra. Misy labiera isan-karazany eo amin'ny paompy. Any amin'ny Brooklyn Pizza Company.
Ny orinasa Seymour Brewing dia miorina ao amin'ny 753 West Second Street, Seymour. 812-524-8888.
Hatchery an'ny trondro State Driftwood
Namboarina teo ambanin'ny Works Projects Administration (WPA) tamin'ny faran'ny taona 1930, io rano mafana io dia misy dobo fiompiana 9 sy dobo mitazona trondro iray. Ny dobo fiompiana dia manodidina ny 1 ka hatramin'ny 0.6 hektara ny habeny ary manome 2.0 hektara ho an'ny fiompiana trondro. Ny fotodrafitrasa dia nampiakatra baskita roa santimetatra 11.6, basikety lehibe efatra hakiho 250,000 ary trondro kankely 20,000 8,500 isan-taona, izay ampiasaina hitrandrahana ny ranom-bahoaka marobe any Indiana.
(nomen'ny Indiana DNR)
Driftwood State Fish Hatchery dia hita any amin'ny 4931 South County Road 250 West, Vallonia, 812-358-4110.
Vallonia Nursery, fizarana ala
Ny iraka akaninjaza dia ny mamboly sy mizara fitaovam-pambolena avo lenta ho an'ny fambolena fitehirizan-tany amin'ireo tompon-tany Indiana. Zana-ketsa efatra tapitrisa sy sasany dia maniry isan-taona avy amin'ny karazany 60. Ny fotodrafitrasa 250 hektara dia mamokatra «conifér» sy hazo mafy.
Vallonia Nursery, Division of Forestry dia miorina amin'ny 2782 West County Road 540 South any Vallonia. 812-358-3621
Hatramin'ny fahazazany, George Schneider, dia nanana faniriana iray - ny hamboly hazo hanatsara ny hatsaran'ny manodidina azy. Nanomboka naniry hazo sy kirihitra George tamin'ny tanimbary kely nindrana azy tamin'ny famonoana akoho amam-panahin'ny ray aman-dreniny ary namokatra.
Taorian'ny sekoly ambaratonga faharoa dia nanambady an'i Mae Ellen Snyder i George. Nividy 24 hektara tamin'ny toeram-pambolena sy fiompiana izy sy ny vadiny vaovao ary nanangana akanin-jaza iray - Schneider Nursery.
Amin'izao fotoana izao, ny akanin-jaza dia ahitana tany maherin'ny 500 hektara ary akaninjaza lehibe indrindra any atsimon'i Indiana. Schneider's dia mivarotra zaridaina sy zaridaina ho an'ny mpanjifa ambongadiny sy antsinjarany.
Schneider Nursery, Inc. dia any amin'ny 3066 East US 50, Seymour. 812.522.4068.